Ngaba abathengisi kufuneka bancame ekwenzeni ubuqu? | Martech Zone
NgeCawa, ngoMatshi 29, 2020 NgeCawa, ngoMatshi 29, 2020 UGarin Hobbs
Inqaku lakutshanje likaGartner linike ingxelo:
Ngo-2025, iipesenti ezingama-80 zabathengisi abatyala imali kubuntu babo baya kuyishiya imizamo yabo.
Uqikelelo lwango-2020: Abarhwebi, ayisiyiyo le nto kuwe.
Ngoku, oku kungakhangeleka kungumbono othusayo, kodwa into engekhoyo ngumxholo, kwaye ndicinga ukuba yile…
Kuyinyani kwindalo iphela ukuba ubunzima bomsebenzi bulinganiswa ngokunxulumene nezixhobo kunye nezixhobo ezikhoyo. Umzekelo, ukumba umsele ngecephe lesipili ngamava alusizi ngokungapheliyo kunokubuyela umva. Ngendlela efanayo, ukusebenzisa amaqonga edatha, amafa edatha kunye nezisombululo zemiyalezo yokuqhuba isicwangciso sakho sobuqu kubiza kakhulu kwaye kunzima kunokuba kufanelekile. Le ndawo yokujonga ibonakala ixhaswa yinto yokuba, xa ibuzwa, abathengisi bathi, ukunqongophala kwe-ROI, iingozi zolawulo lwedatha, okanye zombini, njengezona zizathu ziphambili zokunikezela.
Ayothusi loo nto. Ukwenza ubuqu kunzima, kwaye izinto ezininzi kufuneka zidibane kwi-symphony ukuze yenziwe ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Njengakwezinto ezininzi zeshishini, ukuphunyezwa ngempumelelo kwesicwangciso-qhinga sentengiso kuza ekudibaneni kwezinto ezintathu ezibalulekileyo; Abantu, iNkqubo, kunye neTekhnoloji, kunye nobunzima buvela xa ezo zinto zingenzi-okanye zingenako- ukuhamba ngesantya esinye nesinye.
Ma siqale nge abantu: Ukwenza intsingiselo okunentsingiselo kunye nokusebenzayo kuqala ngokuba nenjongo elungileyo, ukubeka umthengi embindini webali elixabisekileyo. Akukho sixa se-AI, i-analytics eqikelelweyo okanye i-automation inokutshintsha eyona nto ibaluleke kakhulu kunxibelelwano: i-EQ. Ke, ukuba nabantu abafanelekileyo, abanengqondo efanelekileyo, sisiseko.
Ukwenza umntu: Inkqubo
Okulandelayo, makhe sijonge inkqubo. Inkqubo efanelekileyo yomkhankaso kufuneka ithathele ingqalelo iinjongo, iimfuno, igalelo, kunye namaxesha egalelo ngalinye, kwaye ivumele amaqela ukuba asebenze ngendlela abathembise ngayo, bekhululekile kwaye basebenza. Kodwa abathengisi abaninzi banyanzeliswa ukuba balalanise, befumanisa ukuba iinkqubo zabo zithintelwe kwaye zichazwe kukusilela kwezixhobo zabo zokuthengisa kunye neqonga. Inkqubo kufuneka ilisebenzele iqela, hayi enye indlela ejikeleze.
Ukwenza umntu: iTekhnoloji
Okokugqibela, masithethe nge Technology. Amaqonga akho okuthengisa kunye nezixhobo kufuneka zibe kukugcwaliseka kokunyanzeliswa, amandla okuphindaphinda, hayi into yokuthintela. Ukwenza umntu kufuna ukuba abathengisi azi abathengi babo, kunye Ukwazi abathengi bakho bafuna idatha… idatha eninzi, evela kwimithombo emininzi, eqokelelweyo kwaye ihlaziywa rhoqo. Ukufumana nje idatha akwanelanga. Kukukwazi ukufikelela ngokukhawuleza kunye nokuhluza ukuqonda okusebenzayo kwidatha evumela abathengisi ukuba bahambise umyalezo owenzelwe wena ogcina isantya kunye nemeko yamava abathengi banamhlanje.
Uninzi lwezona ziqhelekileyo kwaye Ethembekileyo amaqonga ayasokola ukuhlangabezana neemfuno ezihlala zisanda ezicela umngeni kubathengisi bale mihla. Idatha egcinwe kulwakhiwo lwetabhululi ezindala (ezobudlelwane okanye enye indlela), inzima ngokwendalo (kunye / okanye iyabiza) ukugcina, ukukala, ukuhlaziya kunye nokubuza kunedatha kwizakhiwo ezingezizo ezitafile, ezinje ngokuhlu.
Uninzi lwamaqonga emiyalezo yelifa lisebenzisa isiseko sedatha esekwe kwi-SQL, efuna ukuba abathengisi bayazi i-SQL, okanye babanyanzele ukuba bayeke ukulawulwa kwemibuzo yabo kunye neesahlulo kwi-IT okanye kubunjineli. Okokugqibela, la maqonga amadala ahlaziya idatha yawo ngee-ETL zasebusuku kunye nokuhlaziya, ukuthintela ukubanakho kwabathengisi bokuhambisa imiyalezo efanelekileyo nefanelekileyo.
Ngokwahlukileyo, amaqonga anamhlanje afana Inakoyiswa, Sebenzisa ukwakheka kwedatha ye-NoSQL eyoyikekayo, ukuvumela imijelo yedatha yexesha lokwenyani kunye nokunxibelelana kwe-API kwimithombo emininzi ngaxeshanye. Ezi zakhiwo zedatha zikhawuleze ngokwendalo ukuya kwicandelo kwaye kulula ukufikelela kuzo ukuqhuba izinto ezizezakho, ukunciphisa kakhulu ixesha kunye neendleko zamathuba okwakha kunye nokwazisa amaphulo.
Yakhelwe kutsha nje kunokhuphiswano lwabo olugqityiweyo, uninzi lweziqonga zibandakanya ngokwendalo okanye zixhasa iindlela zonxibelelwano ezininzi, ezinje nge-imeyile, iselfowuni yokutyhala, i-in-app, iSMS, ukutyhala isikhangeli, ukuphinda ujonge ekuhlaleni kunye nokuthumela imeyile ngqo, ukuxhobisa abathengisi ukuba bahambise ngokulula ukuqhubeka kwelinye lamava njengoko abathengi behambisa amava abo kumajelo e-brand kunye neendawo zokuchukumisa.
Ngelixa ezi zisombululo zinokuthambisa ijika lenkqubo yokuphucuka kunye nokunciphisa ixesha lokuthengisa, ukwamkelwa kuye kwacotha phakathi kweempawu ezinkulu okanye ezimi ixesha elide, ngokwesiko zigcina kwaye zigcina umngcipheko. Ke, uninzi lwenzuzo lutshintshele kwiimveliso ezintsha okanye ezihlumayo ezithwala imithwalo yobugcisa belifa elincinci kakhulu okanye mvakalelo umothuko.
Abathengi akunakulindeleka ukuba bahambe kulindelo lwexabiso labo, ubulula kunye namava nangaliphi na ixesha kungekudala. Ngapha koko, imbali isifundisa ukuba olo lindelo kunokwenzeka ukuba lukhule. Ukushiya isicwangciso sakho sobuntu akunangqondo kwindawo yentengiso enabantu abaninzi, ngexesha apho amava abathengi ngokuqinisekileyo lelona thuba lilungileyo labathengisi lokuhambisa nokwahlula ixabiso labo lophawu, ngakumbi njengoko zininzi iindlela ezikhoyo ezikhoyo.
Nazi izibophelelo ezintlanu abathengisi kunye nemibutho yabo abanokuzenza ukubanceda ngokuphumelela ngempumelelo:
Chaza ifayile amava ufuna ukuhambisa. Mayibe yindawo yekhampasi yako konke okunye.
Vumelana ukuba utshintsho luyimfuneko kwaye zibophe kuyo.
Hlola izisombululo ezinokuba zintsha okanye zingaqhelekanga.
Thatha isigqibo sokuba umvuzo yesiphumo sikhulu kuneengozi ezibonakalayo.
Abantu mabachaze igama elithi inkqubo; vumela inkqubo ibeke iimfuno zetekhnoloji.
Abathengisi baye ukumba umsele, kodwa awwenzi baye ukusebenzisa icephe.
Cela iDemo enokubakho
tags: Kuyenzekaukwazisa ngentengisoNgokwezifisointengiso yomntu
Garin nguMlawuli weQhinga lokuSebenza ku Inakoyiswa, iqonga lokuxhobisa abathengisi be-B2C ukuba bathathe ulawulo lwecebo labo lokuhambisa imiyalezo ngokuhambisa imodeli yedatha eguquguqukayo kunye neyoyikisayo yokwazisa umjelo we-1: incoko ye-1 nge-imeyile, iselfowuni, iwebhu kunye neendlela zentlalo.